China Plaster Of Paris Bandages (POP) fanamboarana sy orinasa | Weirui
Ny vokatray dia mitazona ny tombony ho an'ny karazana herinaratra, ny vovo-tany tsy hiala, ary ny fotoana fanamafisana dia haingana. Ny sandan'ny kaloria dia mifanaraka amin'ny hafanan'ny olombelona, ​​ka tsy handoro ireo marary mampiasa izany. , ampiharo araka ny BP britanina ...
Ny vokatray dia mitazona ny tombony ho an'ny karazana herinaratra, ny vovo-tany tsy hiala, ary ny fotoana fanamafisana dia haingana. Ny sandan'ny kaloria dia mifanaraka amin'ny hafanan'ny olombelona, ​​ka tsy handoro ireo marary mampiasa izany. , ampiharo arakaraky ny fenitra BP britanina.
1) Fotoana fanamafisana haingana sy maharitra: 2-5 min.
2) Mandeha haingana ny fotoana hilomano: 5-10 seg.
3) Azo maina izy io ho haingana be aorian'ny fanamafisana, ny haavony dia mety hahatratra 3.2mpa aorian'ny 8 min.
4) Ny sandan'ny kaloria dia manakaiky ny maripanan'ny olombelona: 38-42.
5) Ny fanamafisana dia mifanaraka amin'ny fangatahan'ny dokotera sy ny marary, ny jeneraly dia fonosina amin'ny sosona 6-8, fonosina amin'ny 8-12 sosona amin'ny toeran'ny tanjaka, mora ny mitandrina ny fahasalamana sy ny filaminana, nandalo betsaka fitsapana ara-pahasalamana, mahazoa fankasitrahana avy amin'ny dokotera sy ny marary lalina.
Kaodin'ny vokatra Size
Ny Plaster Of Paris Bandages dia ampiasaina amin'ny fametahana plaster.
Teo aloha: Fatoran'ny tubular
Manaraka: Mifanaraka amin'ny fehy PBT